Ny Courses MappingGIS: ny tsara indrindra dia misy. - Geofumadas
Janoary, 2014 ArcGIS-ESRI, Fampianarana CAD / GIS, jeospatial - GIS, qgis, maro
MAPingGIS, afa-tsy ny manolotra antsika mahaliana bilaogy, mifantoka amin'ny modely ara-barotra amin'ny tolotra fiofanana an-tserasera momba ny olana momba ny toe-javatra geospatial.
Tamin'ny taona 2013 fotsiny, mpianatra maherin'ny 225 no nandray ny fianarany, isa izay toa lehibe amiko, mieritreritra fa ny ezaka dia mitoetra amin'ireo mpandraharaha roa izay nanomboka kely izany, herintaona lasa izay. Ka araraotinay ny fiandohan'ny taona 2014 mba hampiroboroboana ny hetsika ataonareo.
Ady amin'ny Python Online amin'ny ArcGIS 10.
Mianara mamorona script raha manamboatra automatique GIS sy hitantana vaovao spatial
Miaraka amin'izany dia mianatra mampiasa ny fomba fandaharana Python ianao amin'ny fomba mahafinaritra sy intuitive. Ny fampianarana dia kendrena ireo mpampiasa ArcGIS maharitra izay te hanao dingana hafa, fanamafisana ny fitantanana ny fampahalalana, ny asa fanatanjahan-tena ary ny asa fanoratana.
Amin'ity fianarana ity dia mianatra, tsikelikely ianao:
Miorina am-pahamendrehana amin'ny fiteny fandaharana Python.
Hary adidinao manokana mba hitahiry azy ireo ny fizotran'ny GIS izay nataon'ny tanana teo aloha.
Ny vondron'olona, ​​ny tatitra sy ny fifanakalozan-kevitra amin'ny votoatin'ny GIS dia mora entina.
Dingana fanaovana fanatanterahana GIS kely hitantanana ny fampahalalana be dia be.
Fitantanana sy fananganana sarintany sy andian-sarintany na dia tsy manokatra ArcGIS aza.
Fampiarana an-tserasera amin'ny fampivoarana ny fampivoarana ny tranonkala.
Manaova rafitra ara-jeografika feno OpenGeo Suite
Ny fampianarana dia mikendry ireo rehetra maniry hianatra hamolavola rindranasan-tranonkala misy rindrambaiko open source, avy amin'ny fanafarana ny angon-drakitra, ny fitantanana ary ny famoahana azy amin'ny alàlan'ny tranokala manaraka ny fenitry ny OGC.
Mamorona angon-drakitra spatial ary manaova famakafakana amin'ny alàlan'ny PostGIS.
Mametraka sy mamorona serivisy momba ny angon-drakitra miaraka amin'ny GeoServer.
Manorata sarintany ary mamorona endrika avy amin'ny tranonkala miaraka amin'ny GeoExplorer.
Ampiasao ny cache sary sarintany miaraka amin'ny GeoWebCache.
Mamoròna fampiharana amin'ny tranokala miaraka amin'ny OpenLayers sy Leaflet.
Mamorona ary ampiasao ny rakitra geoJSON hamonjy ny maritrano sy fanamorana ny zava-drehetra.
Onjam-peo amin'ny GIS Expert: ArcGIS, gvSIG ary QGIS.
Ianaro ny fomba hiatrehana ireo mpanjifa GIS miisa telo miely sy mitaky be indrindra amin'ny tsenan'ny asa eran'izao tontolo izao.
Vita feno izay ianaranao miasa miaraka amina fampahalalana geografia raster sy vector, projection, fitsipika topolojia, fanovana, mamorona simbolo sy ny soratra, sarintany sarotsoratra ho an'ny pirinty sy famoahana an-tserasera, geoprocessing miaraka amin'ny fitaovana toy ny Model Builder in ArcGIS, SEXTANTE ao amin'ny gvSIG na GRASS ao QGIS, sns.
Fantaro ny interface ny ArcGIS, gvSIG ary QGIS.
Miaraha miasa amin'ny sari-tany sy tolotra ivelany.
Hanova ny angon-tsivana
Miaraha miasa amin'ny rafitra mandrindra sy ny sary georeference raster.
Mamorona sary an'ohatra sy ny mari-pamantarana.
Mamorona geodatabases sy topology.
Manaova fandalinana spatial.
Miaraha miasa amin'ny SEXTANTE.
Ambarao ny sarintany amin'ny aterineto
Fomba an-tserasera an-tserasera: PostGIS.
Atombohy amin'ny fitantanana ny votoatin'ny tranokalan'ny open source PostGIS.
Mameno ny filàna ity lesona ity toy ny: Ahoana ny fomba manafatra endrika forme amin'ny tranokala? Ahoana ny fomba hanafainganana ny hafainganan'ny valiny rehefa mametraka fanontaniana? Ahoana ny fanatanterahana ny spatial? Fa maninona no misy karazana geometrika ary karazana jeografika? Ahoana no hahitana hoe inona ny data ao amin'ny PostGIS?
Ankoatr'izay, hianatra metodolojika ianao, tsikelikely:
Ahoana ny fametrahana PostgreSQL + PostGIS
Ahoana ny fomba hamoronana angon-drakitra ary manome azy ny fahafaha-manao spatial
Ahoana ny fametrahana ny angon-drakotra
Ahoana ny fomba hijerena sy hidirana ireo angon-drakitra voatahiry ao amin'ny PostGIS
Inona no karazana géometrika misy
Ahoana ny fomba anaovako famakafakana spatial sy ny fiasan'ny spatial
Ahoana ny fomba hanafainganana ny fangatahana
Ahoana ny fomba hiasa miaraka amin'ny data data
Ahoana ny fomba hiasana miaraka amin'ny angon-drakitra OpenStreetMap
ArcGIS online fianarana.
Ianaro ny fomba hiatrehana ny mpanjifan'ny GIS desktop lehibe indrindra sy mitaky amin'ny tsenan'ny asa eran-tany.
Ity dia làlana iray feno izay hianaranao hiasa miaraka amin'ny fampahalalana ara-jeografika an'i raster sy vector, fanitsiana, fanoharana ary fanaovana mari-pamantarana, vinavina, georeferencing, geoprocessation, famoronana geodatabases sy topology, famoronana sarintany amin'ny fanontana sy famoahana ireo mpijery web miaraka amin'ny ArcGIS amin'ny Internet.
Ahoana ny fanitsiana angon-drakitra ara-jeografika
Ahoana ny fomba fiasa miaraka amin'ny latabatra
Ahoana no fomba hiasa miaraka amin'ny rafitra mandrindra
Ahoana ny fomba fanoratana sary rastera
Ahoana ny fomba hampitaovana fitaovana ArcToolbox
Ahoana ny fomba hanatanterahana ny famakafakana miaraka amin'ny Modelbuilder
Ny fomba hamoronana heviny an'habakabaka sy ny fametrahana label
Ahoana ny fanatanterahana ny famakafakana raster miaraka amin'ny Spatial Analyst
Ahoana ny famoronana geodatabases
Ny fomba hamoronana fitsipika topological
Ahoana ny famoahana ny sarintany an-tserasera miaraka amin'ny ArcGIS amin'ny Internet
Fomba an-tserasera amin'ny QGIS.
Mianara mitantana ny programa GIS misokatra loharano misimisy indrindra amin'ny tsenan'ny asa eran-tany.
Ity dia làlana iray feno izay hianaranao hiasa miaraka amin'ny fampahalalana momba ny jeografika raster sy vector, famolavolana, fanitsiana, fanoharana ary fanamarihana, famoronana sarintany momba ny fanontana, geoprocessing, GRASS, famoahana an-tserasera, sns.
Inona no atao hoe GIS?
Interface tsara QGIS. Fampidinana amin'ny rafi-mandrindra rafitra.
Symbolika sy ny mari-pamantarana.
Generation vaovao sy ny fanovana latabatra.
Fampidirana GRASS ao QGIS.
Sarintany amin'ny fanaovana pirinty sy famoahana an-tserasera.
Fampidirana miaraka amin'ny angona marobe: PostGIS.
Ireo fampianarana dia miasa miaraka amin'ny Virtual Classroom, mba hahafahan'izy ireo alaina amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny fidirana 24 ora. Ary hitantsika fa mahaliana ny fomba nanararaotan'izy ireo ny bilaogy sy ny lisitry ny mailaka ho fampisehoana ny kalitaon'ny fianarany.
Raha te hahafantatra bebe kokoa,
Mandehana any amin'ny MAPingGIS
Previous Post«Previous Nahoana no izao tontolo izao Map in 1922
Next Post BlogPad - Editor WordPress ho an'ny iPadmanaraka »
2 mamaly ny "The MappingGIS Courses: ny tsara indrindra dia misy."
Milaza aminao aho, ry zazalahy
Aurelio hoy izy:
Voninahitra ho anao ny nanoratanao lahatsoratra feno tamin'ny fianarantsika. Tena feno fankasitrahana izahay. MANDRAY ANAREO!